စပင်. ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် နှင့် အမှုန်ရူပဗေဒတွင် စပင် ဆိုသည်မှ
ⓘ စပင်. ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် နှင့် အမှုန်ရူပဗေဒတွင် စပင် ဆိုသည်မှာ ခြေခံအမှုန်များ၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အမှုန်များ နှင့် အက်တမ်နျူကလိယများတွင် ရှိသည့် ထောင့်ပြောင်းအဟုန် ..
စမ္ပာနဂိုရ် ခေါ်သော စမ္ပာနဂရ အစစ်သည်ကား မြန်မာနိုင်ငံ၌ မဟုတ်ပါ။ မဇ္ဈိမတိုက်၌ ပါဝင်သော တိုင်းကြီး ၁၆ တိုင်းတို့တွင် အင်္ဂတိုင်း ပါဝင်သည်။ ထိုအင်္ဂတိုင်း၏ မြို့တော်သည်ကား စမ္ပာနဂရ ဖြစ်သည်။ ထို ‘စမ္ပာနဂရ’ သည် ယခုအခါ အန္ဒိယ နိုင်ငံ ဘာဂလ္ပုဒ်မြို့မှ အနောက်ဘက် ၂၄ မိုင်အကွာ ပတ္ထရ်ဃားဋ် အရပ်၏ အနောက်မျက်နှာအနီးတွင် ချမ္ပာနဂါ ရွာအဖြစ် တည်ရှိနေသေးကြောင်း ‘အန္ဒိယ ကြေးမုံကျမ်းကြီး’ စာမျက်နှာ ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် နှင့် အမှုန်ရူပဗေဒတွင် စပင် ဆိုသည်မှာ ခြေခံအမှုန်များ၊ ဖွဲ့စည်းထားသော အမှုန်များ နှင့် အက်တမ်နျူကလိယများတွင် ရှိသည့် ထောင့်ပြောင်းအဟုန် ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
စပင် ဆိုသည်မှာ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်တွင်ရှိသည့် ထောင့်ပြောင်းအဟုန် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်မျိုးမှာ ပတ်လမ်းဆိုင်ရာ ထောင့်ပြောင်းအဟုန်ဖြစ်သည်။
စပင်တွင် တိကျသော ပမာဏရှိပြီး လားရာဘက်လည်းရှိ၍ ဗက်တာကွမ်တတီ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် သာမန် ဗက်တာ အတိုင်းအတာ၏ လားရာဘက်နှင့်တော့ ကွာခြားသည်။ အခြေခံအမှုန်များတွင် မည်သည့် အမျိုးတူ အမှုန်တွင်မဆို တူညီသော စပင် ထောင့်ပြောင်းအဟုန် ရှိသည်။
စပင်၏ နိုင်ငံတကာစံယူနစ်မှာ ရှေးရိုးထောင့်ပြောင်းအဟုန်ကဲ့သို့ပင် Joule-second ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်မှု စပင်နံပါတ်ဟူသော ယူနစ်မရှိသည့် အတိုင်းအတာဖြင့် မှတ်သားဖော်ပြသည်။ ဝုဖ်ဂန်းပေါ်လီ သည် စပင်သဘောတရားကို ပထမဆုံး တင်ပြခဲ့သူ ဖြစ်သော်လည်း အမည်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိပါ။